Caafimaadka - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ma jiro waax warshadeed oo waxqabadka guddiga wareegga iyo tayada ay aad muhiim u yihiin.
Wareegyada Pandawill iyo la-hawlgalayaasha wax-soo-saarkeennu waxay leeyihiin faham aasaasi ah heerarka iyo filashooyinka tayada ee ay u baahan yihiin waaxda caafimaadku waxaanan dammaanad ka qaadaynaa waxqabadka iyo daacadnimada guddiyada aan soo saareyno oo aan bixinno.
Wareegyada Pandawill waxay bixiyaan noocyo dhammaystiran oo dhammaystiran oo la iibin karo (oo ay ku jiraan HASL hoggaanka ku saleysan heshiiska oo lagu aqbali karo codsiyada caafimaadka iyo nolosha muhiimka ah) iyo dhammaan walxaha laminate (oo ay ku jiraan soo-saareyaasha la magacaabay haddii loo baahdo).
Muhiimadda raadinta ee looxyada wareegga caafimaadka ayaa muhiim ah waxaanan awoodnaa inaan siino wadarta tayada iyo waxsoosaarka baaritaanka dhammaan guddiyada la bixiyay, oo ay kujiraan qaybaha iskutallaabta, shaybaarka la iibin karo iyo qaybaha tijaabada ee muujiya iska caabbinta delamation inta lagu gudajiro howsha kulanka.
Guddiyadeena wareegga waxaa si weyn looga adeegsadaa adduunka oo dhan codsiyada caafimaadka iyo Pandawill waxay hubineysaa in guddi kasta oo la bixiyo uu yahay midka ugu tayada fiican uguna qaabaysan / la soo saaray si loo bixiyo heerarka ugu sarreeya ee waxqabadka iyo kalsoonida.